WINDOWS ကို 10 ရက်နေ့တွင်ယောင် DISABLE လုပ်နည်း - WINDOWS ကို - 2019
Windows 10 ကို operating system ကိုအပေါ်ယောင်ကို disable
သတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုး၏ search အတွက်နေ့စဉ်အသုံးပြုသူများကဖိုင်တွေအများကြီးကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး run ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ အကျိုးဆက်များဖြစ်သောကြောင့်ပင်မလိုချင်တဲ့ software ကိုဆံ့ကြောင်း installation files များအနှံ့တရားဝင်အရင်းအမြစ်များအပေါ်, ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲကြသည်။ sandbox - ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆန့်ကျင် operating system ကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ, ကြော်ငြာ, တံဆိပ်များနှင့် tullbarov အန္တရာယ်ရှိတဲ့တပ်ဆင်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်မရတိုင်း sandbox 'ယုံကြည်စိတ်ချရသော insulator တွင်လည်းအာကာသဖြစ်ပါတယ်။
Sandboxie - ထိုသို့သောဆော့ဖျဝဲတို့တွင်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိအကြိုက်ဆုံးအတွင်းပိုင်း obespecheniya.Eta sandpit ဆို file ကို run ကြောင့်အပေါငျးတို့သသဲလွန်စအနည်းငယ်ကလစ်ကိုဖကျြဆီးခွင့်ပြုပါတယ်။
installation ပရိုဂရမ် built-in သည့် installation ဖိုင်မလိုချင်တဲ့ဆော့ဝဲ Sandboxie sandbox ', အတှငျးအလုပျ၏အရှိဆုံးတိကျဖျောပွခကျြအဘို့အထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို, ထို့နောက်၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်အပေါငျးတို့သခြေရာတွေကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်ခဏလည်ပတ်ပါလိမ့်မယ်။ sandbox က Settings default settings ကိုပြသပါလိမ့်မည်။
1. ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ၏တရားဝင် site မှ installation ဖိုင်သူ့ဟာသူ sandbox 'ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
2. ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနောက်သင် setup file ကို run နှင့်ပရိုဂရမ်ကို install ရမည်ဖြစ်သည်။ ကဖြတ်လမ်း menu ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, right-click ပစ္စည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ် "sandbox ထဲမှာ Run".
3. တစ်ဦး "guinea ဝက်" ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသော program တစ်ခု Iobit Uninstaller, ထို operating system ကိုအတူတူပြုစုသူ optimizers add မှအဆိုတင်သွင်း။ အဲဒီအစားသူကလုံးဝမဆိုပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိုင်ရှိနိုင်ပါသည် - အောက်တွင်ပြသလူအပေါင်းတို့သည်ပစ္စည်းများအားလုံးမျိုးကွဲများအတွက်တူညီကြသည်။
4. ဒေါင်း installation ဖိုင်တွင်, ညာဘက်ကလစ်နှိပ်နှင့် item ကို select အဆိုပါ sandbox 'အတွက် Start.
5. default Sandboxie စံ sandbox ထဲမှာ program တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဆက်ကပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဘို့အများအပြားရှိပါတယ်လျှင် - ရွေးချယ် click နှိပ် OK ကို.
6. ပုံမှန် installer ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးတည်းသာအင်္ဂါရပ် - ယခုအသီးအသီးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဖိုင်ကယာယီနှင့် installation files များဖန်တီးလိမ့်မည်ဟုစနစ်နှင့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုအထီးကျန်အာကာသအတွင်းရှိမရှိ။ Program ကိုမတပ်ဆင်ရသေးနှင့် loaded မဟုတ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်ဘာမှထွက်မလာပါဘူး။ လူအပေါင်းတို့သည်ကြော်ငြာကို tick ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် - ငါတို့သည်ကြောက်လန့်ဖြစ်ဘာမျှမရှိသည်!
7. စနစ်ဗန်း desktop ပေါ်မှာအတွက် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစဉ်အတွင်းပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းကျွန်တော်မှတ်ချက်ချကြပြီအရာအားလုံးကိုတပ်ဆင်ရန် download ပြုလုပ်နိုင်စေအငျတာနကျအိုင်ကွန် loader မှအစီအစဉ်ကိုပုံပေါ်ပါတယ်။
8. အဆိုပါ sandbox 'စနစ်န်ဆောင်မှုများပစ်လွှတ်ကာကွယ်ပေးသည်နှင့်အမြစ်များ၏ parameters တွေကိုပြောင်းလဲပစ် - မပါကို malware ထွက်ရနိုင်တော့မည်, နှင့် sandbox' အတွင်း၌နေထိုင်မည်မဟုတ်။
9. တစ်ဦး sandbox ထဲမှာလည်ပတ်နေသောအစီအစဉ်၏တစ်ဦးကထူးခြားတဲ့ feature ကို - သင်က window ၏ထိပ်ရန်ညွှန်ပျံဝဲလျှင်, အဝါရောင်ဘောင် podstvetitsya ။ ထို့အပြင်, ဒီ screen ပေါ်မှာ taskbar ခေါင်းစဉ်အတွက်စတုရန်းကွင်းခတ်အတွက်ကင်ထောက်ပြသည်။
10. program ကို install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့က sandbox ထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာကိုမေးလျှောက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ အဆိုပါ sandbox 'နာရီဘေးတွင်အဝါရောင် icon ပေါ်မှာ double-click - ငါတို့သည်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စံ sandbox' မြင်ရပါလိမ့်မည်ရှိရာပင်မပရိုဂရမ်ဝင်းဒိုးကိုဖွင့်လှစ်။
သင်ကချဲ့ထွင်လိုလျှင် - အတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်သောဖြစ်စဉ်များများ၏စာရင်းကိုကြည့်ပါ။ အဆိုပါ sandbox 'ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ - sandbox 'Remove။ ကျွန်တော်အတော်လေးတုန်လှုပ်စေသောကိန်းဂဏန်းများကိုတွေ့မြင်, ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌ - တဦးတည်းဟုထင်ရသောအသေးအစီအစဉ်ကိုဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများ၏ထက်ပိုမိုငါးရာ created နှင့် disk ကိုသိုလှောင်မှုစနစ်၏ထက်ပိုနှစ်ရာ megabytes အထိ ယူ. , setting ကိုပင်တဦးတည်းမလိုချင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုမဖွစျနိုငျသိရသည်။
အထူးသဖြင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်အသုံးပြုသူများသည်အကယ်စင်စစ် programmer Files folder ထဲမှာစနစ် drive ကိုပေါ်ဤအကြောင်းဖိုင်များကိုကြည့်ရှုဖို့ကိုတက်ကြောက်။ ဤတွင်အရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာရဲ့ - သူတို့ဘာမှမတှေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားအချက်အလက်များကို sandbox 'အတွင်းတွင်ဖန်တီးခဲ့ကြကျနော်တို့အခုအချိန်မှာဖြစ်ကြပြီးကို clean up ။ တူညီသော window ထဲတွင်ရုံစာနယ်ဇင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော sandbox 'Remove။ မဟုတ်တစ်ခုတည်းဖိုင်သို့မဟုတ်ယခင်ကစနစ်အတွက်ချိတ်ဆွဲခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို။
လိုချင်သောဖိုင်များကိုဖန်တီးခဲ့ကြအလုပ်အစီအစဉ်ကိုစဉ်အတွင်းပါလျှင် (ဥပမာ, အင်တာနက်ဘရောက်ဇာလျှင်), သင် sandbox ဖျက်ပေးလျှင် Sandboxie ဟာ sandbox 'ထဲကသူတို့ကိုဆွဲထုတ်ဖို့အသုံးပြုသူလှုံ့ဆျောနှင့်မည်သည့်ဖိုင်တွဲထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်သည်။ သီးခြားအာကာသအတွင်းမည်သည့်ဖိုင်ကိုဖွင့်ဖို့ sandpit နောက်တဖန်အဆင်သင့်ကိုစင်ကြယ်စေ။
Sandboxie - အရှိဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောတဦးနှင့်အွန်လိုင်းအဘယ်ကြောင့်လူကြိုက်အများဆုံး sandbox 'ပါပဲ။ တစ်ဦးအဆင်ပြေရုရှား interface ကိုအတူယုံကြည်စိတ်ချရသောပရိုဂရမ်တစ်ခုထိခိုက်မှုစိတ်ကြိုက် operating system ကိုမပါဘဲ untested နှင့်သံသယရှိသူဖိုင်တွေရဲ့သက်ရောက်မှုအနေဖြင့်အသုံးပြုသူကာကွယ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးပါမည်။
ဗီဒီယို Watch: How To Install Phoenix OS Android On PC OR Laptop Dual Boot Windows + Android UrduHindi (စက်တင်ဘာလ 2019).